Kambodza: ​​ Nosaloran’ny Gazetiboky Glamour Ho Vehivavin’ny Taona (2006) I Somaly Mam · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2017 15:29 GMT
Miasa mafy i Somaly Mam. Miasa mafy izy mba hiatrehana ny lasany. Nandritra ny fahazazany, niaina fanolanana, fampijaliana ary herisetra izy. Nanangana ny ONG AFESIP (Agir pour les Femmes en Situation Précaire) tany Kambodza niaraka tamin'ny vadiny Pierre Legros izy tamin'ny taona 1997, firenena iray ahitana izay anisan'ny olana goavana indrindra ny fanondranana olona an-tsokosoko. Tamin'ny volana Oktobra 2006, amin'ny maha-mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona Kambodziana azy nanokana ny fiainany hamonjy ny vehivavy sy ny zazavavy amin'ny fanandevozana ara-pananahana dia nomem-boninahitra ilay vehivavy 35 taona ho iray amin'ireo vehivavin'ny taona tao amin'ny gazetiboky Glamour nandritra ny fanolorana tao amin'ny Carnegie Hall tao an-tanàndehiben'i New York.
Manana rohy maromaro mankany amin'ireo bilaogin-dahatsoratra ao amin'ny tranonkala momba ny vaovao mikasika ilay mpikatroka miady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko ny ‘Details are Sketchy,’ bilaogy iray momba ny zava-drehetra ao Kambodza.
Tsy misy isalasalana, raha tsy hoe somary tara, fa nisy ny fiarahabana lehibe ho an'i Somaly Mam, mpiara-manorina ny ONG Afesip, izay vao avy nosalorana ny anaran'ny Vehivavin'ny Taona avy amin'ny gazetiboky Glamour.
Namoaka lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe ‘Fankasitrahana ho an'i Somaly Mam’ i Andy Brouwer, izay monina any Angletera, ary manoratra momba ireo olo-malaza tao Kambodza ao amin'ny Andy's Open Door. Mivaky toy izao ny ampahany tamin'izany :
Ny vaovao farany dia notolorana tamim-panajana ny Lokan'ny vehivavin'ny Taona i Somaly Mam omaly avy amin'ny gazetiboky Amerikana Glamor tao amin'ny lanonana iray tany New York. Mivaky toy izao ny fanambarana avy amin'i Glamour : ” Fitaomam-panahy ho an'ny vehivavy manerana izao tontolo izao i Somaly Mam. Noreseny ny fanararaotana nahatsiravina nandritra ny fahazazany ary nanokana ny fiainany hanavotana ireo zazavavy hafa iharan'izany ihany koa izy. Nitondra ny olan'ny fanandevozana ara-pananahana hisarihana ny sain'izao tontolo izao izy, ka izany no manome fiainana tsara kokoa ho an'ireo zaza an'hetsiny handevozina amin'izao fotoana izao any amin'ny trano fivarotan-tena. “
16 ora izayHong Kong (Shina)